Suck My Dick (@enigma_shian) - Wattpad
လိင်တူဆက်ဆံရတာကြိုက်တဲ့ အသက်ပြည့်ပြီးသား ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စိတ်ဖြေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီနေရာမှာ အပြာစာရေးပါတယ် ။ကျွန်တော့်ရဲ့ Role အပါအဝင် ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေ လာမမေးပါနဲ့ ။ မင်းတို့နဲ့ လုံးဝ၊လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး ။
ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေ ၊ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားပြောတွေ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံနည်းတွေပါဝင်တဲ့ ယောက်ျားချင်းလိင်ဆက်ဆံတဲ့အပြာစာပေတွေပဲ ရေးတာဖြစ်လို့ ကြိုက်မှ ဖတ်ပါ ။ မင်းတို့ကို ဘယ်သူမှ မုဒိမ်းကျင့်ပြီး မဖတ်ခိုင်းထားပါဘူး။ ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်ပါ ။ မဖတ်နိုင်ရင် ဆက်ဖတ်နေစရာမလိုပါ ။ဖတ်ပြီးရင်လည်း စာသားတွေ ၊ screenshot တွေ၊Link တွေကို Facebook , Tiktok စတဲ့ တခြား social media platform တွေပေါ်မှာ ပြန်မတင်ပါနဲ့ ။
လိင္တူဆက္ဆံရတာႀကိဳက္တဲ့ အသက္ျပည့္ၿပီးသား ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပါ။ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ စိတ္ေျဖခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဒီေနရာမွာ အျပာစာေရးပါတယ္ ။ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ Role အပါအဝင္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့တျခားအေၾကာင္းအရာေတြ လာမေမးပါနဲ႔ ။ မင္းတို႔နဲ႔ လုံးဝ၊လုံးဝမသက္ဆိုင္ပါဘူး ။
ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားလုံးေတြ ၊ညစ္ညမ္းတဲ့ စကားေျပာေတြ၊ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံနည္းေတြပါဝင္တဲ့ ေယာက္်ားခ်င္းလိင္ဆက္ဆံတဲ့အျပာစာေပေတြပဲ ေရးတာျဖစ္လို႔ ႀကိဳက္မွ ဖတ္ပါ ။ မင္းတို႔ကို ဘယ္သူမွ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး မဖတ္ခိုင္းထားပါဘူး။ ဖတ္ခ်င္ရင္ ဖတ္ပါ ။ မဖတ္ႏိုင္ရင္ ဆက္ဖတ္ေနစရာမလိုပါ ။ဖတ္ၿပီးရင္လည္း စာသားေတြ ၊ screenshot ေတြ၊Link ေတြကို Facebook , Tiktok စတဲ့ တျခား social media platform ေတြေပၚမွာ ျပန္မတင္ပါနဲ႔ ။
Sign up to follow @enigma_shian
enigma_shian Jan 31, 2021 01:15PM
[Unicode]Hello ~မင်းတို့ Update မျှော်နေကြမယ်ဆိုတာ သိတယ် ။ကျွန်တော်လည်း Final မြန်မြန်ရောက်အောင် အပိုင်းသစ်တွေ တစ်သီကြီးတင်ချင်တာပါ ။ဒါပေမဲ့ အရင်လို အချိန်ပြည့် မအားတော့တာကြောင့် Update စိပ်ဖို့မလ...
Stories by Suck My Dick
🔞 ONE SHOTS 🔞
132K 1.1K 1
[Unicode] လိင်တူအပြာဝတ္ထုတိုများ [Zawgyi] လိင္တူအျပာဝတၳဳတိုမ်ား
🔞 Hazel (ဟေဇယ်)🔞
2.8M 52.2K 25
[Unicode] ယောက်ျားနှစ်ယောက်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းကို အသုံးနှုန်း ရိုင်းရိုင်းနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့စာအုပ်ပါ ။ မဖတ်နို...
🔞Selfish Romantic 🔞
235K 6.6K 7
Everest cheated on his boyfriend multiple times with other men . အသုံးနှုန်းရိုင်းပါသည် ။
enigma_shian's Reading List